भोलीदेखि देशैभर गुड्दैनन् पुराना गाडी, चलाए यस्तो सम्म हुनेछ कारवाही ! सेयर गर्नुहोस – My Blog
Home समाचार भोलीदेखि देशैभर गुड्दैनन् पुराना गाडी, चलाए यस्तो सम्म हुनेछ कारवाही ! सेयर गर्नुहोस
भोलीदेखि देशैभर गुड्दैनन् पुराना गाडी, चलाए यस्तो सम्म हुनेछ कारवाही ! सेयर गर्नुहोस
सरकारले आगामी चैत १ देखि मुलुकभर २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन नदिने भएको छ । पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै हटाउने निर्णय लिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
बीस वर्ष नाघेका गाडीको यकिन संख्या विभागसँग पनि छैन । ‘५५ सय रहेको अनुमान गरेका छौं,’ निर्देशक पौडेलले भने । प्रदूषण बढाउने, खर्चिलो हुने, दुर्घटना बढाउने भएकाले पुराना गाडी हटाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण मात्रा उच्च छ । उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक सवारीबाट निस्कने धूलो र धूवाँ रहेको वातावरण विज्ञको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार सवारीबाट हुने प्रदूषणमा पनि पुरानाको प्रभाव बढी छ ।
Previous Postकैलालीको घटना एकसाता मै कञ्चनपुरमा पुन: महिलामाथि निर्घात कुटपिट, अनुहारमा तातो घ्यु खन्याईयो
Next Postपेट्रोल छर्केर आगो लगाईएकी पिडित चौधरीको सहयोगको लागि हारगुहार ! क्रीपया सक्दो सेयर गरी सहयोग गरीदीनुहोला